Rayson | Kurlon chọrọ
Ọhụrụ earro dị elu na-acha uhie uhie na isi iyi + ma ọ bụrụ na ị na-achọ nkasi obi, na-enyere gị aka ịrahụ ụra dị mma, ị nọ ebe kwesịrị ekwesị. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta nnukwu ụlọ ọrụ na ọnụahịa asọmpi, yana nke a na-akwado ya na nkwadebe ọnụahịa., HTTPS: //www.rayonglobal.com.cn
Site na ike R & D siri ike na ike nrụpụta, Rayson ugbu a abụrụla ọkachamara na onye na-eweta ọrụ a pụrụ ịdabere na ụlọ ọrụ. Emepụtara ngwaahịa anyị niile gụnyere ọchịagha Kurlon dabere na sistemụ nchịkwa na usoro mba ofesi. Ọchịchọ Kurlon na-achọ itinye ego na-etinye ego na ngwaahịa R & D, nke na-eme ka ọ dị irè na anyị toro kurlon agụụ. N'ịdabere na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ndị ọrụ anyị, anyị na-ekwe nkwa na anyị na-enye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma, ọnụahịa kachasị mma, na ọrụ kachasị mma. Nnabata ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.Rayson Kurlon chọrọ elu agafeela nyocha ọrụ. A na-enyocha ya n'ihe banyere ịkpa ókè, iwu ụlọ, ihe eji achọ, na ịdị ogologo.
Mgbe anyị mmepe afọ gasịrị, anyị ebilitela mmekọrịta dị ogologo oge na ndị ahịa anyị ogologo oge n'ụwa niile. Biko nwee obi ike na anyị nwere ikike mbupụ ngwaahịa anyị na mmebi iwu agaghị enwe na ngwongwo ndị enyerela. Anyị ji obi anyị niile nabata ajụjụ gị ma kpọọ.
Ebe ọ bụ na ebe guzobere, Rayson chọrọ ịza ụzọ dị egwu ma dị mma maka ndị ahịa anyị. Anyị emeela ka R & D anyị maka atụmatụ ngwaahịa na mmepe ngwaahịa.
Ogologo oge ole ka m ga-esi jee?
Matraasi ọ bụla dị iche. Ọ bụrụ na ị na-atụgharị n'abalị ma ọ bụ teta ya na mgbu ọ bụ oge iji nweta matraasi ọhụrụ n'agbanyeghị afọ ya. Anyị na-akwado ịlele mkpado Iwu ma dochie ma ọ dịkarịa ala afọ asatọ.